ကှယျလှနျသှားပီဖွဈတဲ့ အဈကိုဖွဈသူရမှေနျချေါနကြေ နာမညျလေးနဲ့ အိမျတှငျးစီးပှားရေး လုပျငနျး လုပျကိုငျတော့မယျဆိုတဲ့ လပွညျ့ကဗြာ – Shwe Likes
အဆိုေ တျာရမှေနျ ကတော့ လူကွီး၊ လူငယျ၊ လူလတျ ပိုငျးအားလုံး ကွိုကျနှဈသ ကျအားေ ပးရတဲ့ အဆိုေ တျာတဈယော ကျပါပဲ။ အောငျမွ ငျမှုေ တှရရှိနတေဲ့ အနုပညာ ရှငျဖွဈပမေ ယျ့ အောငျွ မငျမှုကို ကွာရှညျမ ခံစားလိုကျ ရတဲ့ ရမှေနျက ပွီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုငျ လကပဲ ကှယျလှနျ သှားခဲ့ပွီ ဖဈပါတယျ။
ရမှေနျကှယျ လှနျသှားပွီးတဲ့ေ နာကျ ရမှေနျ့ရဲ့ ညီမလေး လပွညျ့က ဗြာက အဈကိုေ ချါနကေနြာမညျေ လးနဲ့ စီးပှားရေးခွလှေမျး စတ ငျတော့မ ယျ့အွေ ကာငျးကို ပရိသတျေ တှကို အသိပေးလာပါတယျ။
လပွညျ့ကဗြာ က “Hello…. တံဆိပျ ကလေးနဲ့ မိတျမဆ ကျပေးခငျ နာမညျပေးဖွ ဈပုံလေးအရငျပွော ပါရစနေျော။ Onlineshop ကို စလုပျ လာတာ 2015 ခုနှဈ (ပိုပိုးမှေးပီးေ နာ ကျပိုငျးလောကျ)ပေါ့။ အဲ့တုနျး ကတော့ မိနျးကလေးပစ်စညျး၊ အဝတျထညျ အိတျ ဖိနပျတှေေ ရာငျးပါတယျ။
တနိုငျတပို ငျလုပျငနျးလေးမို့ အရငျးနှီးလဲ သိပျမရှိ အမွတျလဲန ညျးနညျး နဲ့ ၄/၅သိနျးကို လုံးလညျခြာ လညျလိုကျရငျး လုပျလာတဲ့အ လုပျကလေးက တခါတေ လကြ ဝငျငှကေောငျး လိုကျ တခါတလကြေ အရငျးပွုတျ လိုကျနဲ့ လုပျလာရငျး 2019 မှာ Covid ကွောငျ့ ထိုးရပျသှား တာအခုထိ ပါပဲ။ ဘပီဆုံး ပီးတဲ့ နောကျပိုငျးတော့စိတျလပေီး ရူးပီး လမျးမှားရော ကျသှားမှာရ ယျကွောငျ့ ကိုယျ့စိတျကို အလုပျပေး တဲ့အနနေဲ့ အွေ ကျာလှျောလေးတှေ စရောငျးဖွဈတယျ။”
“ပငျပနျးတာေ တာ့ စလုပျကတ ညျးကပါပဲ။ အျောဒါကောကျ ပစ်စညျးမှာ ပစ်စညျးသှားရှေး။ ပစ်စညျးထုတျ Deli အပျ အကုနျလုံး တယောကျ ထဲ တခါတလေ အိမျနီးရငျ ကိုယျတိုငျပို့ (အမကေတော့ သှားလရော ကားလိုကျမောငျးပေး) အဆိုးဆုံးက ၆ လှာမှာနေ ရတဲ့ ဒုက်ခ။ မုနျ့ထညျ့ပေး လိုကျတဲ့ ဖာလိုကျကွီးေ ရာကျလာရငျ အနီးနားအ လုပျသမား မရှိတော့ ပီနံအိတျနဲ့ ခေါကျတုနျ့ေ ခါကျပွနျ ၆ လှာကို အခါ ၂၀ လောကျ အဆငျးတ ကျလုပျပွီး သယျရတယျ။ ထောပတျသီးတှေ ဝိုငျပုလငျးတှေ အခြိုရညျပုလ ငျးတှဆေိုပိုဆိုး အရမျးပငျ ပနျးပမေယျ့ ဘာလေးေ ရာငျးရောငျး အားပေးကွတဲ့ ကိုယျ့မိသား စုလေးကို ခဈြကွတဲ့ (အထူးသဖွငျ့ ဘပီ ကိုခဈြကွတဲ့သူတှကွေောငျ့ ) တျောတျောလေး အားတကျခဲ့ပါတယျ”
“မှတျမှတျရရ Covid ကွောငျ့ အိမျဝ ငျငှမေရှိ အလုပျတှအေ ကုနျရပျခဲ့ရတုနျးက ငါတို့မိသားစု ဝငျငှမေရှိရငျ ဘထေုပျတှဝေယျပီး Live ရောငျးကွမယျလေ ဆိုပွီးတော့ေ တာငျ ဘပီနဲ့ပွောဖွဈသေးတယျ 😅 မိနျးကလေး အဝတျဂါဝနျကွီးေ တှပါလာရငျတော့ ငါဝတျမရောငျးရဲဘူး 🤣ယောကျြားေ လး အဝတျဆို ငါဝတျပွပွီး ကူရောငျးပေးမယျဆိုပွီး တိုငျပငျဖူးတယျ။
(ရီစရာအမှတျတရလေးပေါ့ ) အခုလုပျ ငနျးလေးနဲ့ အိမျကို အပွညျ့အဝမထော ကျပံ့နိုငျသေးပေ မယျ့လဲ သမီးကွီးနရော ရောကျသှားပွီမို့ အရငျက ထကျ တာဝနျ ၂ဆနဲ့ ပိုကွိုးစားသှားမှာပါ။ အစားအသောကျခဈြသူပီပီ ကိုယျကွိုကျတဲ့ အကွျောလှျောေ လးေ တှကို အကောငျးဆုံး အသနျ့ရှငျးဆုံး အလတျဆ တျဆုံး ရောငျးခပြေးမှာဖွဈပါတယျ။ တံဆိပျ နာမညျလေးကတော့ သူချေါနကြေ ` ပွူးစိနျ ‘ ပါ…. ❤️” ဆိုပွီး အသိပေး လာတာပဲဖွဈပါတယျ။
လပွညျ့ကဗြာ ကတော့ အဈကိုဖွဈသူရမှေနျကှယျလှနျ သှားပွီးတဲ့နောကျ မိသားစုရဲ့သမီးကွီးအဖွဈ တာဝနျတှထေ မျးဆောငျရတော မှာမို့ သူမရဲ့ကိုယျ ပိုငျစီးပှားရေးအ လုပျတှကေို လုပျကိုငျတော့ မှာဖွဈကွောငျး ပရိသတျကို အသိပေးလာ တာပဲဖွဈပါတယျ။ Source: La Pyae Gabyar ‘s fb
အဆိုေ တ်ာရေမွန် ကတော့ လူကြီး၊ လူငယ်၊ လူလတ် ပိုင်းအားလုံး ကြိုက်နှစ်သ က်အားေ ပးရတဲ့ အဆိုေ တ်ာတစ်ယော က်ပါပဲ။ အောင်မြ င်မှုေ တွရရှိနေတဲ့ အနုပညာ ရှင်ဖြစ်ပေမ ယ့် အောင်ြ မင်မှုကို ကြာရှည်မ ခံစားလိုက် ရတဲ့ ရေမွန်က ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင် လကပဲ ကွယ်လွန် သွားခဲ့ပြီ ဖစ်ပါတယ်။
ရေမွန်ကွယ် လွန်သွားပြီးတဲ့ေ နာက် ရေမွန့်ရဲ့ ညီမလေး လပြည့်က ဗျာက အစ်ကိုေ ခ်ါနေကျနာမည်ေ လးနဲ့ စီးပွားရေးခြေလှမ်း စတ င်တော့မ ယ့်အြေ ကာင်းကို ပရိသတ်ေ တွကို အသိပေးလာပါတယ်။
လပြည့်ကဗျာ က “Hello…. တံဆိပ် ကလေးနဲ့ မိတ်မဆ က်ပေးခင် နာမည်ပေးဖြ စ်ပုံလေးအရင်ပြော ပါရစေနော်။ Onlineshop ကို စလုပ် လာတာ 2015 ခုနှစ် (ပိုပိုးမွေးပီးေ နာ က်ပိုင်းလောက်)ပေါ့။ အဲ့တုန်း ကတော့ မိန်းကလေးပစ္စည်း၊ အဝတ်ထည် အိတ် ဖိနပ်တွေေ ရာင်းပါတယ်။
တနိုင်တပို င်လုပ်ငန်းလေးမို့ အရင်းနှီးလဲ သိပ်မရှိ အမြတ်လဲန ည်းနည်း နဲ့ ၄/၅သိန်းကို လုံးလည်ချာ လည်လိုက်ရင်း လုပ်လာတဲ့အ လုပ်ကလေးက တခါတေ လကျ ဝင်ငွေကောင်း လိုက် တခါတလေကျ အရင်းပြုတ် လိုက်နဲ့ လုပ်လာရင်း 2019 မှာ Covid ကြောင့် ထိုးရပ်သွား တာအခုထိ ပါပဲ။ ဘပီဆုံး ပီးတဲ့ နောက်ပိုင်းတော့စိတ်လေပီး ရူးပီး လမ်းမှားရော က်သွားမှာရ ယ်ကြောင့် ကိုယ့်စိတ်ကို အလုပ်ပေး တဲ့အနေနဲ့ အြေ က်ာလှော်လေးတွေ စရောင်းဖြစ်တယ်။”
“ပင်ပန်းတာေ တာ့ စလုပ်ကတ ည်းကပါပဲ။ အော်ဒါကောက် ပစ္စည်းမှာ ပစ္စည်းသွားရွေး။ ပစ္စည်းထုတ် Deli အပ် အကုန်လုံး တယောက် ထဲ တခါတလေ အိမ်နီးရင် ကိုယ်တိုင်ပို့ (အမေကတော့ သွားလေရာ ကားလိုက်မောင်းပေး) အဆိုးဆုံးက ၆ လွှာမှာနေ ရတဲ့ ဒုက္ခ။ မုန့်ထည့်ပေး လိုက်တဲ့ ဖာလိုက်ကြီးေ ရာက်လာရင် အနီးနားအ လုပ်သမား မရှိတော့ ပီနံအိတ်နဲ့ ခေါက်တုန့်ေ ခါက်ပြန် ၆ လွှာကို အခါ ၂၀ လောက် အဆင်းတ က်လုပ်ပြီး သယ်ရတယ်။ ထောပတ်သီးတွေ ဝိုင်ပုလင်းတွေ အချိုရည်ပုလ င်းတွေဆိုပိုဆိုး အရမ်းပင် ပန်းပေမယ့် ဘာလေးေ ရာင်းရောင်း အားပေးကြတဲ့ ကိုယ့်မိသား စုလေးကို ချစ်ကြတဲ့ (အထူးသဖြင့် ဘပီ ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကြောင့် ) တော်တော်လေး အားတက်ခဲ့ပါတယ်”
“မှတ်မှတ်ရရ Covid ကြောင့် အိမ်ဝ င်ငွေမရှိ အလုပ်တွေအ ကုန်ရပ်ခဲ့ရတုန်းက ငါတို့မိသားစု ဝင်ငွေမရှိရင် ဘေထုပ်တွေဝယ်ပီး Live ရောင်းကြမယ်လေ ဆိုပြီးတော့ေ တာင် ဘပီနဲ့ပြောဖြစ်သေးတယ် 😅 မိန်းကလေး အဝတ်ဂါဝန်ကြီးေ တွပါလာရင်တော့ ငါဝတ်မရောင်းရဲဘူး 🤣ယောကျာ်းေ လး အဝတ်ဆို ငါဝတ်ပြပြီး ကူရောင်းပေးမယ်ဆိုပြီး တိုင်ပင်ဖူးတယ်။
(ရီစရာအမှတ်တရလေးပေါ့ ) အခုလုပ် ငန်းလေးနဲ့ အိမ်ကို အပြည့်အဝမထော က်ပံ့နိုင်သေးပေ မယ့်လဲ သမီးကြီးနေရာ ရောက်သွားပြီမို့ အရင်က ထက် တာဝန် ၂ဆနဲ့ ပိုကြိုးစားသွားမှာပါ။ အစားအသောက်ချစ်သူပီပီ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အကြော်လှော်ေ လးေ တွကို အကောင်းဆုံး အသန့်ရှင်းဆုံး အလတ်ဆ တ်ဆုံး ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တံဆိပ် နာမည်လေးကတော့ သူခေါ်နေကျ ` ပြူးစိန် ‘ ပါ…. ❤️” ဆိုပြီး အသိပေး လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လပြည့်ကဗျာ ကတော့ အစ်ကိုဖြစ်သူရေမွန်ကွယ်လွန် သွားပြီးတဲ့နောက် မိသားစုရဲ့သမီးကြီးအဖြစ် တာဝန်တွေထ မ်းဆောင်ရတော မှာမို့ သူမရဲ့ကိုယ် ပိုင်စီးပွားရေးအ လုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်တော့ မှာဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်ကို အသိပေးလာ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Source: La Pyae Gabyar ‘s fb